ဟင်ဒီဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟိန္ဒီဘာသာ (ဒေဝနာဂရီ: हिन्दी, IAST/ISO 15919: Hindī) သို့မဟုတ် ခေတ်ပေါ် စံပြုဟိန္ဒီဘာသာ (ဒေဝနာဂရီ: मानक हिन्दी, IAST/ISO 15919: Mānak Hindī)သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင်အသုံးပြုသော Indo-Aryan ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ခေတ်ပေါ်စံပြုဟိန္ဒီဘာသာသည် သက္ကတဘာသာ ဩဇာလွှမ်းမိုးသော ဟိန္ဒုသ္တာနီဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ယင်းဘာသာသည် ဒေလီမြို့နှင့် မြောက်အိန္ဒယ၌သုံးသော ခရီဗောလီဒေသိယစကားပေါ်အခြေပြုသည်။ ဟိန္ဒီဘာသာသည် ဒေဝနာဂရီအက္ခရာကို အသုံးပြုပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်တကွ အိန္ဒိယအစိုးရတွင်ရုံးသုံးဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယပြည်ထောင်စု၏ စာရင်းသတ်မှတ်ထားသောဘာသာစကား ၂၂ မျိုးတွင်ပါဝင်သည်။
↑ Constitution of India။2April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ About Hindi-Urdu။ North Carolina State University။ 15 August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9August 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Basu၊ Manisha (2017)။ The Rhetoric of Hindutva (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ Cambridge University Press။ ISBN 978-1-107-14987-8။ Urdu, like Hindi, wasastandardized register of the Hindustani language deriving from the Khariboli dialect and emerged in the eighteenth century under the rule of the late Mughals. CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Peter-Dass၊ Rakesh (2019)။ Hindi Christian Literature in Contemporary India (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ Routledge။ ISBN 978-1-00-070224-8။ Two forms of the same language, Nagarai Hindi and Persianized Hindi (Urdu) had identical grammar, shared common words and roots, and employed different scripts. CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Constitutional Provisions: Official Language Related Part-17 of The Constitution Of India။ Department of Official Language, Government of India။ 13 January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PART A Languages specified in the Eighth Schedule (Scheduled Languages)။ 29 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟင်ဒီဘာသာစကား&oldid=735003" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။